Konjac bụ ụdị nri emere na ndịda China. Konjac bụ nri alkaline bara uru, nke nwere ike belata ihe mgbu nke ndị na-eri oke nri acidic. Mgbe ị na-eri konjac ọnụ, ọ nwere ike nweta nguzozi n'etiti acid na alkali na ahụ, nke bara uru na ahụike mmadụ. China malitere ịmalite konjac ihe karịrị afọ 2,000 gara aga, ma mesịa gbasaa na Japan, ebe ọ ghọrọ otu n'ime nri ndị mmadụ kachasị ewu ewu. Enwere otutu konjac, otutu otutu obodo anyi di pl ...
Sizasị na-ezo aka herbs na ngwa nri. Herbs bụ epupụta nke ahịhịa dị iche iche. Ha nwere ike ịbụ ihe ọhụụ, akpọnwụ ikuku ma ọ bụ ala. Ngwa nri bụ mkpụrụ, akụrụ, mkpụrụ osisi, ifuru, ogbugbo na mgbọrọgwụ osisi. Ngwa nri nwere ezigbo ekpomeekpo karịa vanilla. N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike iji osisi mepụta ma ahịhịa na ngwa nri. A na-eji ụfọdụ ngwa nri (dị ka paprika) ma ọ bụ site na mkpokọta ahịhịa (dị ka akpa nri). Ọtụtụ-eji na nri, nri na nri nhazi, ị ...
Akwụkwọ nri friji bụ ụdị nri friji, nke bụ obere ngwugwu nri emere site na ịjụ oyi akwụkwọ nri ọhụrụ dị ka ose, tomato, agwa na kukumba na ọnọdụ kachasị dị ala ma ozugbo enwere ike mgbe emechara ha.
Nduku na -ewekarị akwụkwọ nri na-adị kwa ụbọchị, ụfọdụ ndị enyi dịka ọridgeụ sweetụ nduku na-atọ ụtọ, utịp na ọrụ ụtọ nduku dịkwa mma, ụfọdụ ndị na-enwe mmasị iri nri nduku eghere eghe.